Ungakhulisa Kanjani Izikelemu Zokudla Okuphakelayo, Ukudoba, Noma Ukuzijabulisa - Amaphrojekthi
Ungakhulisa Kanjani Izikelemu Zokudla Okuphakelayo, Ukudoba, Noma Ukuzijabulisa
Kungani Ukhulisa Izikelemu Zokudla?
Umjikelezo Wempilo Wezibungu Zokudla
Yini Edla Izikelemu?
Idizayini Yesitsha Sokudla
Kufanele Ngabe Ujule Kangakanani Ummbila Wokudla Kwami?
Uhlobo Luni Lwesitsha Engiludingayo?
Kufanele Ngigcine Kuphi Izibungu Zami Zokudla?
Ungakhulisa Kanjani Izikelemu
Ukuqala Ipulazi Lakho Lezibungu
Ukugcina Ipulazi Lakho Lezibungu
Ukushintsha Izinto Zokulala
Q: Ngingayisebenzisa yini ifidi ephezulu yenkukhu yokudla kokudla kwezikelemu zami?
Q: Amabhungane ami abonakala ehlasela izikelemu zami!
Q: Ngingakwazi yini ukufaka esiqandisini izikelemu zokudla ukuze zisetshenziswe kamuva?
Kungabonakala kungaqondakali ukufunda ukukhulisa iminyundu ekuqaleni. Kungani ungake ufune ukuthola izimpethu?
Izikelemu zemifino azifani nezibungu onazo ku umqambi wezikelemu . Ngeke zikhiqize ukusakazwa kwezikelemu okubalulekile ukuze kusetshenziswe engadini yakho. Kodwa zinezinye izinzuzo, futhi ngokuqinisekile zilula ngokwanele ukuba zizihlakulele.
Namuhla, sizobheka zonke izici zendlela yokukhulisa izibungu zokudla, kusukela kumjikelezo wokuphila wezibungu ngokwazo kuye ekunikezeni indawo enhle yazo. Noma ngabe unentshisekelo ekukhuliseni izikelemu zokudla ngenzuzo noma ukukhulisa izikelemu zokudla zezinkukhu, uzothola lonke ulwazi oludingayo lapha!
I-snack esiyintandokazi yenkukhu, izikelemu zokudla zinikeza umthombo wamaprotheni wazo zonke izinhlobo zabagxeki. Abantu abagcina izinkukhu, ama-turkeys, amahansi, noma amadada bazozuza kalula ngokukhulisa ukuzitholela kwabo lokhu kudla okumnandi.
Kodwa izibungu zokudla akuzona eze-avians kuphela. Uma unezilwane ezihuquzelayo noma amagundane, ungavele uthole ukuthi zingathanda ukudla izikelemu zezilwane nazo. Amagundane nama-hamsters ikakhulukazi akhetha bona, futhi amagundane amaningi azozijabulela nawo. Ama-hedgehogs wezilwane ezifuywayo nama-ferrets nawo athola izikelemu zokudla zikhanga.
Ezinye izinhlanzi nazo ziwuthanda kakhulu lo mthombo wamaprotheni, futhi empeleni, izibungu zokudla eziphilayo zingaphakanyiswa njengezithiyo zokudoba. UTrout ubheka izikelemu zokudla njengezintandokazi. Ama-Bluegill, i-catfish, i-sunfish nama-crappies nawo kubikwa ukuthi ahehwa yizibungu zokudla njengesiyithi.
Ngisho nezinja namakati angajabulela izikelemu ezimbalwa zokudla ngezikhathi ezithile, ngoba ikakhulukazi zinamafutha namaprotheni. Ngeke kubalimaze, futhi kuyisengezo esinempilo ekudleni kwabo. Uma izilwane ezifuywayo ezinemilenze emine zibonakala zilingwa yizibungu zakho zokudla, zizwe ukhululekile ukuhlanganyela.
Iminyundu nayo ikhuliswa njengokudla kwabantu, yize iningi lethu lingase lithole ukunengwa yileli themba!
Izikelemu zokudla ezomisiwe kuthiwa zinambitheka ngokufana namakinati, futhi empeleni zingasetshenziswa ekuphekeni esikhundleni samantongomane. Labo bethu abangamamenemene athe xaxa bangagaya iminyundu bese bengeza ezintweni ezibhakiwe ukuze kuthuthukiswe amaprotheni esingakwazi ukukubona.
Noma ngabe uhlela ukunezela ekudleni koqweqwe lweqanda lakho ngamaphrotheni angeziwe, noma ukuthengisa okuthengisayo esitolo sendawo sokudla, ukukhulisa izibungu zokudla kulula ukukwenza.
Futhi, uma uthola ukuthi ukunikezwa kwakho kukhungathekisa, izikelemu zokudla zingancipha emzimbeni noma zomiswe ukuze zisetshenziswe kamuva kokuphakelayo. Izikelemu ezomile zizantanta, ngakho-ke azikulungele ukudoba, kepha zenza umuthi omuhle echibini lendawo le-koi noma echibini ledada.
Umjikelezo wempilo yezikelemu ngezigaba ezine: iqanda, izibungu, isiphungumangathi kanye nebhungane elimnyama.
Amabhungane amadala angabesifazane angabeka amakhulu amaqanda ngesikhathi sokuphila kwabo. La maqanda acishe alingane nocezwana lothuli futhi ayanamathela. Ebunjwe njengamabhontshisi amancane amhlophe, azonyamalala ngokushesha angene kunoma iyiphi impahla yokulala okhetha ukuyisebenzisa.
Lapho iqanda lichanyuselwa, kuvela isibungu. Lezi zibungu yizibungu zokudla ongafuna ukuzondla ezifuyweni zakho noma uzisebenzise njengesithiyo. Ekuqaleni, izikelemu zokudla ziyoba zincane kakhulu, kepha ngaphezu kwesigaba sazo sesibungu esingamasonto ayi-8-10 zizokhula ngokushesha zifike ku-1.5 1.5 ubude.
Lezi izibungu ezinsundu babe nesiphephelo esiqinile esivikela imizimba entekenteke ngaphakathi endaweni yabo. Njengoba zikhula, zizokhipha ama-exoskeleton kanye ne-moult yazo. Umbungu wokudla uzolala kuze kube izikhathi ezingama-20 ngesikhathi sesibungu.
Ngasemlonyeni wokugcina, okuvelayo akusona isibungu sokudla esinsundu ngokukhanyayo, kepha a isiphungumhlophe .
Iziphungumangathi azidli noma zikhiphe udoti. Ngenkathi zinamahlumela lapho imilenze nezimpiko kufanele zibe khona, azisebenzi. Lezi zinhlobo ze-pupal zingashwabana, kepha zibuthaka ngokwedlulele futhi kufanele zishiywe zodwa ukuze zikhule. Lesi sigaba sizothatha amasonto ama-1-3.
Ekugcineni, lapho ukufundwa kuphela, i ibhungane elidala elimnyama izophuma efomini le-pupal, ichithe isikhumba sayo okokugcina. Ekuqaleni, leli bhungane limhlophe, kodwa njengoba izingqimba zalo ziba lukhuni iba mnyama ngombala kusuka konsundu kuya komnyama. Amabhungane amnyama anamaphiko aqinile, kepha awakwazi ukundiza.
Amabhungane amadala amnyama athatha amasonto ambalwa ngemuva kokuphuma kwifomu le-pupal ukukhula, kepha aqale ukukhwelana. Abesifazane bazongena ku-substrate noma embhedeni wabo bese bebeka amaqanda abo lapho, baqale lo mjikelezo futhi. Amabhungane amnyama azophila kuze kube izinyanga ezintathu kulesi sigaba sabadala ngaphambi kokuba afe.
Uma ucabanga ukuthi ungazikhulisa kanjani izikelemu zokudla, kubalulekile ukwazi ukuthi bazodlani. Futhi empeleni, kunezinhlobonhlobo eziningi zezinketho ezingasetshenziswa ezingasetshenziswa.
Ukudla kokuqala nokudla okusetshenziswe kakhulu yi-substrate, noma okombhede, ozovusa izikelemu zakho kuwo. Bazokudla, bahlale kuwo, futhi banambithe kuwo, ngakho-ke kuyizinhloso eziningi.
Ukunquma ukuthi uzondla ngani imisundu kungaba lula njengokuthenga isitsha sama-oats apheka ngokushesha. Lezi oats ezomile, eziyizicaba zenza i-substrate enhle, kepha uzodinga amasentimitha ambalwa azo amboza phansi kwesitsha sakho sokuhlala.
Okunye ukudla kombhede kufaka phakathi okusanhlamvu, okusanhlamvu kakolweni, ukudla kwekati noma kwenja, okusanhlamvu kwasekuseni okunjenge Wheaties noma Cheerios, kanye nofulawa kakolweni. Uma unebhokisi le-cereal elidlule kakhulu, noma enye inja endala, yisebenzise - vele ugweme okusanhlamvu okunoshukela noma izinto ezingadonsela ezinye izinambuzane izintuthwane .
Ukukhetha kwakho kwesibili kokudla kuzohlinzeka umswakama odingwa yimisundu yokudla. Ngenkathi i-substrate yabo kufanele ihlale yomile kancane ngakho-ke ayibumbi noma inuke kabi, izibungu zokudla zisadinga umswakama ukuze zikhule endaweni yazo.
Iningi labantu likhetha ukudla okufana neziqu zamazambane noma izaqathe, njengoba lokhu kuthatha isikhashana ukubumba. Kodwa-ke, ungakhetha ukusebenzisa i-watermelon rind, izingcezu zama-apula, ulethisi noma isipinashi, noma ezinye izithelo ezizogcina ukuma kwazo isikhashana. Gwema izithelo ezisawolintshi nezithelo ezithambile njengobhanana noma ama-plums, njengoba lezo zibhidlika ngokushesha okukhulu.
Uma ukudla kwakho kwesibili kuqala ukuthuthukisa isikhunta noma ama-wilts kuze kufike lapho kuqala khona ukonakala, kususe bese umquba noma ukukulahla ngokushesha. Lokhu kudla kuzodinga ukuthi kushintshwe njalo njengoba kuqala ukubola.
Ukudla okungaphansi noma okombhede kungasetshenziswa izinyanga ezintathu kuya kwezine ngaphambi kokuthi kudinga ukushintshelwa umbhede omusha. Imfucumfucu yezikelemu izokwakha kuyo ngaleyo nkathi yesikhathi, futhi yenza umanyolo omkhulu, ngakho-ke ungamane uwulahle! Yigcine bese uyifaka enqwabeni yakho yomquba, noma uyisebenze ngqo enhlabathini.
Manje, ake sikhulume ngendawo yakho yezikelemu zokudla. Kunezinketho eziningi ezahlukahlukene laphaya, kepha zonke zinezinto ezimbalwa ezifanayo:
Sebenzisa iziqukathi ezijulile ezinamacala abushelelezi
Qiniseka ukuthi kunomoya omuhle, kungaba ngokusebenzisa isembozo semesh noma ukuhlinzeka ngohlobo oluthile lokuhamba komoya
Gcina isitsha sakho se-worms endaweni efudumele (70 degrees Fahrenheit is optimal).
Iminyundu ayikwazi ukukhuphuka ngaphezu kwamasentimitha ambalwa ngaphezulu kwesiqinti sayo. Qinisekisa ukuthi unesitsha esinezindawo zokulala, amasentimitha ambalwa ukuvimbela ukukhuphuka, kanye nendawo ethe xaxa yezikelemu ezinganqwabelana ngaphezulu kwe-substrate.
Mina ngokwami ​​ngithanda isitsha esinezinyawo okungenani ukujula, kepha ungasebenzisa noma yini kuze kube ngosayizi womgqomo omkhulu wokugcina weRubbermaid - kuya kuphela ngokuthi ufuna ukukhulisa izibungu ezingaki! Khumbula, uma isiqukathi sisikhulu, uzodinga i-substrate eyengeziwe, kanye nezimpethu lapho uzokwazi ukukhula kakhulu.
Inketho elula kakhulu kubantu abaningi bokuqala ukugcina izimbungulu zokudla ethangini le-aquarium. Ungathenga i- amalitha ayishumi angama-aquarium angama-rectangular ngentengo ephansi. Amabhodlela we-Mesh aquarium ayatholakala futhi, anikezela ukuhamba komoya okudingekayo ukugcina izibungu zijabule.
Uma uyi-DIYer, ungakhetha isitsha eshibhile ngokuthenga i- umgqomo omkhulu wepulasitiki futhi wenza ukulungisa okuthile kuyo. Uzodinga ukufaka iphaneli enezikhala (ngincamela okokusebenza kwesikrini sewindi) iningi lesembozo ukuvumela ukuhamba komoya okudingekayo. Ungahle uthande ukwengeza umoya omncane owengeziwe eceleni kwengxenye ephezulu yomgqomo, futhi ubeke imesh endaweni.
Abanye abantu abanobuqili baye bafihla imigqomo yabo yezikelemu ngokuyakha ngamakhabethe amadala okugcina amapulasitiki.
Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka usike iningi langaphansi kwamadilowa amabili, ushiye onqenqemeni olwanele ukuze ukwazi ukunamathisela isikrini semesh endaweni ukuze usebenze njengephansi. Uzodinga futhi ukwengeza amaphaneli wokungenisa umoya ngaphakathi kokubili kwekhabhinethi nasezinhlangothini zedrowa, futhi ngamaphaneli wesikrini anezikhala agcina izibungu ngaphakathi.
Amaqanda ezikelemu zokudla kanye nebhungane kanye nesibungu azowela onqenqemeni abe ngamadilowa aphansi ngokuhamba kwesikhathi, futhi kuzodingeka ujikeleze ikoloni lakho lesibungu sokudla kaninginingi njengoba besebenza ezigabeni zabo zokuphila. Ukubeka amabhungane amnyama kudrowa eliphezulu, iziphungumangathi nezibungu ezindala maphakathi, kuthi izibungu ezincane ezansi ngokuvamile kube lula ngezinhloso zokuzinakekela.
Ama-Mewworms akhula kahle kakhulu cishe ngama-70 degrees Fahrenheit. Kubanda kakhulu, futhi ukukhula kwazo kuzoncipha. Kushushu kakhulu futhi baqala ukufa.
Ngenxa yalokhu, kungcono ukugcina imisundu yakho yokudla endlini egumbini elintofontofo. Njengoba bengeke baphunyuke, ungabafaka ekhabethe uma ungathanda ukufihla. Ungazifihla uma wakhe okuthile okufana nekhabhinethi elichazwe ngenhla. Futhi, uma unezingane, ungabeka i-aquarium yazo eshalofini njengephrojekthi yesayensi ephilayo.
Ngenkathi izibungu zokudla zingesabi ukukhanya, iningi lazo lithanda izindawo ezimnyama endaweni yazo njengamakhabethe noma amakhona amnyama. Uma usebenzisa i-aquarium, ungakhetha ukubeka iphepha ngaphezu kwezinhlangothi ukuvimba ukukhanya okuthile. Iziqukathi zepulasitiki ze-Opaque nazo zizosebenza kahle ngaphandle kokuthi ufuna ukwazi ukubona izibungu zakho ngaphandle kokuphakamisa isivalo.
Uma uhlela ukukhulisa izibungu zakho zokudla egalaji lakho, ungangeza ukulawulwa kwesimo sezulu phakathi nezinyanga ezibandayo zasebusika ngokubeka iphedi yokushisa ebekwe kuma-70-75 degrees ngaphansi komgqomo wakho wesibungu. Isikhathi sasehlobo singenza amagalaji ashise kakhulu ukulima izimpethu, ngakho-ke qaphela ukuwahambisa uma izinga lokushisa likhuphuka.
Lapho usulungiselele isiqukathi sakho futhi wanquma ukuthi uzondla kanjani izibungu zakho, inqubo yangempela yokuzinakekela ilula.
Qiniseka ukuthi kukhona okungenani ama-intshi angu-2-3 we-substrate esitsheni sakho. Beka izingcezu zamazambane noma isanqante ngokungahleliwe ku-substrate. Ngemuva kwalokho, mane ufake izibungu zakho.
Njengamanje, kungenzeka ukuthi ubuza ukuthi 'Ngakho-ke, ngingazithenga kuphi izibungu zokudla?' Lokho kuxhomeke kakhulu ekutheni ufuna ukuqala ngamangaki, nokuthi isitsha sakho sikhulu kangakanani. Ngithanda uku-oda izikelemu zokudla ku-inthanethi futhi ngilungiselele indawo yazo yokuhlala kusengaphambili ukuze ngizokwazi ukuzifaka ngokushesha lapho zilethwa.
Qiniseka lapho uthenga izimpethu zokudla ukuthi empeleni uthole imisundu. Noma yini edayiswa njengemisundu yokudla eyengeziwe ingaba empeleni imisundu ye-wax, uhlobo oluhlukile, futhi leyo ngeke izale. Abanye abantu bathengisa 'ama-super worms' nawo amakhulu kakhulu futhi okungenzeka ukuthi awazali.
Ngincamela uku-oda emthonjeni onjenge Lena lapho unenketho yokuthola imisundu yokudla ezingxenyeni ezahlukahlukene zesigaba sezibungu.
Lapho u-oda, kubalulekile ukukhetha okungenani iminyaka emibili ehlukene yezikelemu ukuze zikwazi ukuthuthukisa umjikelezo wokuzala oqhubekayo. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, oda izikelemu zokudla ezincane nezinkulu lapho uqala. Ungahlala ungeza elinye iqoqo kamuva uma kudingeka. Ngokuhamba kwesikhathi kuzoba nezibungu kuzo zonke izigaba zentuthuko, kepha ekuqaleni kuthatha isikhathi ukwakha leli koloni.
Izimpethu zakho sezifikile! Manje sekuyisikhathi sokuba bazinze ekhaya labo elisha. Ukusuka lapha, inqubo yendlela yokukhulisa imisundu yokudla iba lula ngokumangazayo.
Faka izibungu zakho embhedeni wazo, qiniseka ukuthi zinomswakama wazo, futhi… uhambe.
Cha, impela, vele uhambe. Uma ufuna ukuba muhle, ungafafaza okokulala okuthe xaxa ngaphezulu ukuze uzifake, kepha bangazitholela indlela yabo phansi bebodwa.
Zihlole njalo ukuze uqiniseke ukuthi umthombo womswakama awuqali ukonakala. Ngincoma ukuthi uhlole izikelemu zakho zokudla kanye ngosuku. Mina ngokwami ​​ngithanda iziqathe zesanqante njengomthombo wami womswakama, futhi imvamisa ngidinga eyodwa noma ezimbili kuphela endaweni yokuhlala engamalitha ayi-10. Uma isanqante iqala ukoma, ngiyifaka esikhundleni sayo.
Qaphela izinambuzane zokusanhlamvu. Lezi zinambuzane ezincane ezimhlophe ezincane zingakhula ezindaweni ezingenakho ukuhamba komoya okwanele. Uma uhlakulela inkinga yokukhipha okusanhlamvu, kuzodingeka uhlukanise ngokucophelela izibungu zokudla ku-substrate yazo bese uzifaka esikhundleni sazo. Ungafaka umquba substrate esele ngaphandle kwezinkinga.
Njalo ezinyangeni ezintathu noma kunjalo, shintsha i-substrate. Uma i-substrate iqala ukuzizwa imanzi, yishintshe ukuze ingakhuli isikhunta. Uma kuvela iphunga, buyisela i-substrate. Imisundu yokudla eyomile yimisundu yokudla!
Ekugcineni, kuzobukeka sengathi unothuli oluningi emgqonyeni kunombhede. Lolo thuli lwaziwa njenge-frass, futhi empeleni luyinhlanganisela yebhungane elimnyama kanye nesibungu sesidlo kanye nezicucu ezincane ze-substrate esele.
Le vidiyo izokukhombisa indlela elula yokuhlukanisa amabhungane nezibungu zakho kwi-frass. Qiniseka ukuthi ugcina i-frass esitsheni esinomoya omncane isikhashana ngocezu lwesanqante ukuvumela noma yimaphi amaqanda noma izikelemu ezikhule zikhule ngokwanele ukuba zikwazi ukuphuma, bese umane uzifake kukholoni lakho eliqabulekile!
A: Yebo! Ukudla kwenkukhu kuzosebenza kahle kakhulu njenge-substrate yokudla yemisundu yakho yokudla.
Noma kunjalo, hlola ilebula eduze kakhulu. Noma yikuphi ukudla okuqukethe umhlaba we-diatomaceous earth-grade kufanele kugwenywe. I-particle enhle kakhulu yomhlaba we-diatomaceous ingase ingabi nangozi kithi nasezilwaneni zethu, kodwa kufana nezigidi zezinsingo ezincane kumsundu wokudla. Izikelemu zakho zizosikwa, ziphelelwe amanzi emzimbeni, futhi zife.
Ukudla okuphezulu kwamaprotheni akuvamisile ukukhiqiza noma yiziphi izibungu zokudla ezingcono kunesitsha se-oats esheshayo. Uma ufuna ukonga imali, ungavele ukhethe isitsha esishibhile sama-oats asheshayo. Kodwa ukudla okunamaprotheni amaningi kusiza izibungu zakho zikhuluphale ngokushesha, okusho ukuthi ungakha izibungu eziningi ngesikhathi esifanayo.
IMP: Cishe awunamswakama owenele lapho kubo. Uma imvelo yomile ngokuphelele, amabhungane akho azoqala ukuhlasela izibungu ngenxa yomswakama wazo odingekayo. Kuphakathi engeza esinye isiqeshana sesanqante, noma engeza ibhola likakotini elinciphise kancane elifakwe ebhodleleni elidala ukuze lisuswe endaweni engaphansi komhlaba.
Hlola njalo ukuze uqiniseke ukuthi umthombo wakho womswakama usha. Ngincoma ukubheka nsuku zonke koloni lakho ukuze uqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle.
imeleni i-s & m
A: Impela! Qaphela, noma kunjalo. Ukubeka izikelemu zokudla efrijini kusho ukuthi uzibangela zingalali. Ngenkathi bengaphila esitsheni esiqandisini kuze kube izinyanga ezimbalwa, futhi akufanele bashintshele kubhungane ngaleso sikhathi, nabo abadli kakhulu.
Kubalulekile ukuthi ubanikeze okuthile abazokudla uma ugcina izibungu zakho ngale ndlela. Umbhede omncane nocezu olulodwa lukherothi noma amazambane esitsheni esincane esinomoya ongcono kufanele kubanikeze abakudingayo ukuze baphile.
Kubalulekile futhi ukuthi uhlole izibungu zakho njalo ukuze uqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle. Umswakama omningi kakhulu ungadala ukukhula kwesikhunta, futhi awukufuni lokho.
Isitsha esihle sokugcina izimpethu zakho esiqandisini singenye yalezi Dlulisa iziqukathi zokugcina ukudla izimbobo zixhunywe kusivalo somoya. Zama ukugwema ukuwafaka, ngoba lokhu kuzonciphisa ukuhamba komoya futhi kudale umswakama ngaphakathi kweziqukathi.
Ngabe usukulungele ukwenza ukungena kwezolimo kwemisundu? Ufundile ukukhulisa izikelemu zokudla manje, futhi kulula impela ukukwenza. Ungahlala uthengisa ngokweqile kwakho ezitolo zezilwane zasekhaya noma ezitolo zokuheha! Ngabe kukhona engingazange ngikumboze onelukuluku lokwazi ngakho? Buza imibuzo yakho ngezansi bese ngizozama ukuyiphendula.
isayina umfana ofuna ukuthandana nawe
ulifaka kanjani ivolumu ezinweleni ezincane
indlela yokwenza imihuzuko isuke ngokushesha
ed sheeran ukuma komzimba wakho